स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर व्यवसाय चल्न दिए अर्थतन्त्र सुध्रिन्छ : विष्णु अग्रवाल (अन्तर्वार्ता) - Pardafas
कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दै जाँदा नागरिकको दैनिक जीवनसँगै देशको अर्थतन्त्र पनि बिग्रेको विश्लेषण हुन थालेको छ । सरकारको आधिकारिक धारणामा अर्थतन्त्र सबल नै छ भन्ने छ तर सरोकारवाला सबै खस्किँदै गएको भनेर धारणा सार्वजनिक गरिरहेका छन् । बैंक वित्तीय संस्थामा देखिएको तरलताको चाप, खुद्रा बजार व्यवसायमा देखिएको महँगी/मूल्य वृद्धि, ठप्प जस्तै देखिएको विकास निर्माणको कामले देशको अर्थतन्त्र सबल भएको संकेत गर्दैन । यसै सन्दर्भमा उद्योगी व्यवसायीहरुको छाता संस्था नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालसँग न्युज एजेन्सी नेपालले गरेको संवाद :
अहिले देशको आर्थिक र व्यावसायिक अवस्था कस्तो छ ?
नेपाल उद्योग परिसंघले सबै क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरुसँग निरन्तर छलफल गरिरहेको छ । पछिल्लो समय नेपालका ठूला र राम्रा उद्योगी व्यवसायीहरुको नै मनोवल कमजोर बन्दै गएको छ । नयाँ लगानी गर्ने, उद्योग खोल्ने योजनामा कोही उद्योगी व्यवसायी छैनन् । किनकी पछिल्लो समय उद्योग व्यवसायमा लगानी गर्ने खालको उपयुक्त वातावरण नै छैन । लगानीको वातावरण नहुनुमा धेरै कारणहरु छन् । जसमा कोभिड संक्रमण, उद्योगी व्यवसायीहरुले बैंकबाट कर्जा पाउन नसक्नु आदि छन् । उत्पादन भएका वस्तुहरु बजारमा माग घट्दै जाँदा गोदाममा नै थन्किएर बसेको छ ।
त्यस्तै बजारमा बैंकमा कर्जाको ब्याजदर पनि बढ्दै गएको छ । यस्तो परिस्थिति उद्योगी व्यवसायीलाई दुई÷तीन वटा कुराले मनोवल कमजोर बनाएको छ । जसमा पछिल्लो समय धेरै न्यूजपेपर तथा अनलाइनहरुमा व्यवसायीहरुको विषयमा समाचारहरु आएका छन् । उद्योगी व्यवसायीहरुले गरेको गलत कामको स्पष्ट सबुत नहुँदा वा छानविन भइरहँदा समेत उद्योगीको मानमर्दन भएको छ । त्यसले पनि पछिल्लो समय लगानीको वातावरणलाई बिगारेको छ । सरकार र निजी क्षेत्र बीचमा भएका सम्झौताहरु विकास निर्माण, कुनै ठेक्का पट्टाको लागि भएको हुन्छ । यस्तो सरकार र निजी क्षेत्रबीच भएको सम्झौताले अर्थतन्त्रको फाउण्डेशन तयार बनाएको हुन्छ । सरकारसँग भएको सम्झौतामा कुनै पनि निजी क्षेत्रको एक व्यक्तिले आफ्नो परिधि भित्र रहेर राम्रो काम गरि रहेका छन भने उनीहरुलाई सरकारले प्रोत्साहन गर्ने सरकारको कर्तव्य हो ।
तर, सम्झौता भए अनुसार काम ढिला गरेका छन् वा सम्झौता भन्दा बाहिर गएर काम गरिरहेका छन् भने उनीहरुलाई सचेत गराएर सम्झौता भए अनुसारको परिधि भित्र ल्याउने काम गर्नुपर्छ । कुनै सरकार र निजी क्षेत्र बीच भएको सम्झौतासँग सम्बन्धित केही विवाद छ । त्यसको लागि सरकारी संयन्त्रहरु रहेको छ । जसमा राजश्व चुहावट हुन्छ राजश्व अनुसन्धान रहेको छ । कुनै अनियमिता गरेको छ त्यसको छानविन गर्ने अख्तियार रहेको छ ।
तर यस्ता निकायहरु हुँदाहुँदै पनि निजी क्षेत्रसँग भएको सम्झौतामाथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ । जुन समयमा सम्झौता भएको भए पनि सरकार वा सम्बन्धित निकायका कर्मचारी परिर्वतन हुर्दा पनि त्यस बेला भएको सम्झौतालाई वैधानिकता मान्नु पर्छ । जसरी पछिल्लो समय चारै तिरबाट काम गरिरहेका निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरुको छविमा आँच आउने काम भएको छ । यसको दीर्घकालीन असर गर्छ । मैले कुनै एक जनाए व्यवसायीको कुरा गरेको छैन । समग्र उद्योगी व्यवसायीको कुरा गरेको छु । यसरी समग्र निजी क्षेत्र माथि प्रश्न उठ्दा व्यवसायीको मनोवल कमजोर हुन्छ । निजी क्षेत्र र सरकार बीच रहेको विस्वास समेत गुम्छ । जसरी सरकारले छानविनको क्रममा जुन तरिकाले निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीको गलत प्रचार गर्ने काम भएको छ त्यसलाई बचाउनु पर्छ । आर्थिक गतिविधिमा ठूलो चुनौति मोलेर उद्योगमा लगानी गर्न व्यवसायीहरुलाई सरकारले सम्मान गर्नुपर्छ ।
उद्योग व्यवसायमा लगानी गर्ने व्यवसायीहरुले राज्यबाट पाउनु पर्ने सेवा सुविधासहित मान सम्मान पनि सरकारले दिन सक्नुपर्छ । जुन अहिले भएको छैन । अहिले उद्योगी व्यवसायीहरुले कोरोना महामारी तथा मुलुकको अर्थतन्त्रको वर्तमान स्थितिको समेत सामना गर्नु परेको छ । यसको कारणले पनि लगानी गर्ने व्यवसायीको मनोवल कमजोर भएको छ । यसमा सरकार तथा मिडियाले पनि सोच्नु पर्ने भएको छ ।
पछिल्लोे ६ महिनाको मुलुकको आर्थिक सूचकहरु नबिग्रिएको सरकारले भनेको छ । उद्योगी व्यवसायीहरुले तरलतादेखि अन्य धेरै समस्या रहेको बताएका छन् । सरकार निजी क्षेत्र बीचमा मुलुकको आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण कहाँ मिल्यो कहाँ मिलेन ?
विगतका वर्षहरुको तुलनामा विकास खर्चको प्रतिशत हेर्ने हो भने ठूलो अन्तर रहेको छैन । सरकारले उठाउने राजस्व संकलन राम्रै भइरहेको छ । अहिले मूल्यवृद्धि बढेको छ । जुन अन्तर्राष्ट्रिय बजार, माग बढ्दै गएकाले मूल्यवृद्धि हुनु स्वाभाविक छ । तर, महत्वपूर्ण कुरा ठीक उल्टो व्यवसायीहरुले बजार वस्तुहरुको माग घटेको बताउनु हुन्छ । यसरी समग्र अर्थतन्त्रमा कुनै पनि वस्तुको माग ओरालो लागेको छ । जसमा विद्युतीय सामग्री होस् वा विलासिताका वस्तु होस्् सबै प्रकारका वस्तुहरुको माग विगत तीन महिनादेखि लगातार रुपमा घटेको छ । पैसाको ब्याज बढी तिरिरहेको छ । यसरी सरकार र निजी क्षेत्रबीच केही न केहीमा मिसम्याच भइरहेको कुरामा कुनै दुविधा छैन । अहिले जति पनि समस्या आएका छन् । तरलता, आयात प्रतिस्थापन समस्याको विषयमा कुराहरु आएका छन् । निजी क्षेत्रले सबै समस्याको सामना गर्नुपरेको छ । जसमा अहिलको दुई÷तीन वटा सूचकले कभर गरेको छैन ।
सरकारले पुनःकर्जा, रिफाइनान्स, बैंक ब्याजदर घटाउने गरी दुई÷तीन वटा सहुलियत ल्याएको थियो । यसबाट कति उद्योगी व्यवसायीले लांभान्वित भए वा सरकारको नीतिको कारण हुन सकेन ?
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गरेका रिफाइनान्स जस्ता सहुलियतहरु केही व्यवसायीहरुले पाएका छन् । तर, सरकारले ल्याएका ती नीति पूर्ण छैनन् । जुन अहिले तरलताको समस्या भोगिएको छ । सरकारले समयमा नै रकम भुक्तानी नहुने समस्या भइरहेको छ । यी सबै मुलुकको अर्थतन्त्र नै खुम्च्याउने खालका समस्या आएका छन् । त्यस्तै अर्को व्यवसायीहरुले बैंकमा जम्मा गरेको कुल निक्षेपको २० प्रतिशत खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यसले अझ व्यवसायीहरुलाई समस्या बनाएको छ ।
त्यस्तै व्यापारीहरुमा शंका र उपशंका वातावरण पैदा गरेको छ । अहिले आएका अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्न आयातलाई कम गर्ने वा बैंकमा नपाइरहेको कर्जालाई कसरी सहज बनाउने भन्ने रहेको छ । सरकारले नकारात्मक नसोचेर सकारात्क रुपमा अब मुलुकको अर्थतन्त्रका आकार कसरी बढाउने भनेर सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ । सरकारले निजी क्षेत्र मैत्री नीति बनाउनु पर्छ । निजी क्षेत्रलाई कडाइ गर्ने नीति बन्नु हुँदैन । हामीले यसैका आधारमा सरकारलाई केही सुझाव दिएका छौं । शोधानान्तर घाटा कम गर्नको लागि विदेशबाट आउने रेमिट्यान्सलाई बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउनुपर्छ । जुन नेपाली श्रमिकहरु विदेशमा काम गरेर रेमिट्यान्स पठाएका छन् । विदेश जाने श्रकिकहरु बढिरहेका छन् । तर नेपालमा आउने रेमिट्यान्स घटिरहेको छ । रेमिट्यान्स बढाउनुको लागि बंगलादेशमा जस्तै नीति आवश्यक छ । जसमा विदेशमा काम गरेर नेपालमा रेमिट्यान्स पठाएका छन् । उनीहरुलाई केही अतिरिक्त ब्याज तथा अनुदान दिनसके रेमिट्यान्स बढ्छ । बंगलादेश तथा पाकिस्तानमा विदेशबाट रेमिट्यान्स पठाए वापत अतिरिक्त सुविधा पाउँछन । हामीले पनि अर्थमन्त्रीलाई भनेका छौँ ।
रेमिट्यान्स पठाउनेलाई दुई प्रतिशत ब्याज दिनुपर्छ । सरकारले यस्तो व्यवस्था गर्दा रेमिट्यान्स पनि पठाउन प्रोत्साहन हुुन्छन् । अन्य देशमा रेमिटेन्समा अतिरिक्त ब्याज दिँदा २० देखि ४० प्रतिशत तत्काल फाइदा र रेमिट्यान्स बढेको छ । नेपालमा निर्यात गर्दा यस्तो सुविधा दिइरहेका छौ । यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा धेरै फरक पार्छ । अर्को नेपालबाट भारतमा पनि विभिन्न सामानको निर्यात भइरहेको छ । तर भारतको निर्यातमा अतिरिक्त सुविधा पाएको छैन ।
रेमिट्यान्स कम हुनुको प्रमुख कारण भन्सारमा मूल्य निर्धारण गरेर पठाएको पुस्तकमा कहिले धेरै पनि हुन्छ, कहीँ कम पनि हुन्छ । त्यसको बीचको रेट मानेर सबै आयात भएका वस्तुमा उनीहरुले मूल्याङ्कन गरेर त्यसको आधारमा भन्सार लिएको हुन्छ । त्यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा धेरै विकृतिहरु पैदा गरेको छ । विश्व व्यापार संगठनको के मान्यता छ भने कारोबार मूल्यका आधार भन्सार मूल्य लगाउनु पर्छ । यो पनि सुझाव दिएका छौँ ।
तरलता अभाव सहज बनाउन सरकारले के गर्नुपर्छ ?
पछिल्लो समय उद्योग व्यवसायीले भोग्दै आएको ठूलो समस्या तरलता हो । उद्योगी व्यवसायीहरुले बैंकबाट ऋण लिनु प¥यो भने बैंकहरुले ऋण दिनको लागि आनाकानी गरिरहेका छन् । बैंकहरुको सीडी रेसियो पनि ९० प्रतिशत भन्दा माथि नै रहेको छ । बैंकहरुमा तरलता गणना गर्ने प्रक्रियामा डलरको निक्षेप र डलरको ऋण समेत जोडिन्छ । तर अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकहरुमा के पाइन्छ भने तरलता मापन गर्दा डलरको निक्षेप र ऋणलाई गणना गरिँदैन । तसरी नेपालमा पनि तरलता मापन गर्दा डलरको गणना हटायो भने ५० देखि ८० अर्ब रुपौयाँ बैंकिङ प्रणालीमा आउँछ ।
त्यस्तै तरलता अभाव हुुनुमा अर्को पनि समस्या छ । सरकारले विगतका वर्षदेखि समयमा नै पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन्। त्यसले पनि तरलता अभाव भएको छ । तरलता अभाव कम गर्न सरकारले उठाएको राजश्वको २० प्रतिशत राष्ट्र बैंकमा नभएर बैंकहरुमा राख्ने हो भने तरलता सहज हुन्छ । बैंकहरुले सहि ठाउँमा कर्जा प्रवाह गर्न सहज हुने अवस्था आउँछ । सरकारले विकास खर्च गर्ने ठूला मन्त्रालयहरुले पुँजीगत खर्च तीव्र गतिमा गर्न सके मात्रै तरलतामा सहज आउँछ ।
सरकारसँग भएको पैसा बजारमा नआउँदा तरलता अभाव भयो भन्ने सबैको भनाइ छ । यो विषयमा अर्थमन्त्रीसँग भएको छलफलमा परिसंघले के सुझाव दिनुभयो ?
यो विषयमा परिसंघले दुई वटा सुझाव दिएको छ । जसमा दीर्घकालीन सुझावमा नेपालमा भएको खरिद ऐनलाई नै अध्ययन गरेर समग्र सरकारले खर्च गर्ने प्रक्रिया छ । त्यसलाई सरकारले एक पटक परिमार्जन गर्नु आवश्यक छ । त्यस्तै सरकारले उठाउने कुल राजश्वको २० प्रतिशत कमर्सियल बैंकहरुमा रकम राख्नुपर्छ । तरलता गणना गर्दा डलरको निक्षेप र डलरको ऋणलाई गणना गर्नु भएन ।
तर सरकारले यो बीचमा एउटा नीति परिर्वतन गरेको छ । स्थानीय तहको बैंकमा भएको रकम प्रभावमा ५० प्रतिशत मात्रै तरलतामा गणना गर्न पाउने व्यवस्था थियो । अहिले ५० प्रतिशतबाट बढाएर ८० प्रतिशत बनाएको थियो । यसले पनि पछिल्लो समय बैंक तथा व्यवसायीहरुलाई केही सहज भएको छ ।
मुलुक फेरि बन्दाबन्दी वा लकडाउनका जानसक्ने आकलन गर्न सकिन्छ । तर उद्योग व्यवसाय सुचारु राखेर अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनु पर्ने अवस्था छ । अब कसरी अगाडि बढ्ने ?
अब हामीले मुलुकलाई बन्दाबन्दी वा लकडाउन भन्दा पनि कोरोनासँगै बाच्न सिक्नुपर्छ । कोरोनासँगै आफ्ना दैनिक गतिविधिलाई अगाडि बढाउनु पर्छ । पछिल्लो समय कोरोना महामारीबाट बच्नको लागि घरबाट नै कार्यालयको काम गर्ने प्रणाली विकास भएको छ । त्यसको पनि अन्त्य गर्नुपर्छ भौतिक रुपमा नै कार्यालय आएर काम गर्ने सबैलाई प्रेरित गर्नुपर्छ । मास्क लगायत अन्य सुरक्षाको मापदण्ड कडाइका साथ पालना गरेर कामलाई अगाडि बढाउनु पर्छ । हामीले पनि अब यो बाटो नै अपनाउनु पर्छ । हाम्रो भन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भएका मुलुकले एक दिनमा दुई लाख भन्दा बढी मानिसहरु संक्रमित हुँदा पनि दैनिकी काम रोकेका छैन भने लकडाउन गरेका छैनन् ।
सरकार पनि त्यही मोडलका अगाडि बढ्नुपर्छ । अहिले कोरोना संक्रमण भए पनि सात दिनमा निको हुने गरेको छ । कुनै पनि व्यक्ति अस्पतालमा भर्ना हुनुपर्ने अवस्था आएको छैन । अस्पतालहरुमा बिरामीको छाप पनि बढेको छैन । त्यसैले नेपालको अर्थतन्त्र चलायमान राख्नको लागि अर्थतन्त्र प्रभावित नहुने गरी सुरक्षाका मापदण्डमा कडाइ गरेर अहिलेको स्थितिमा सकार अगाडि बढ्नुपर्छ । लकडाउन तथा बन्द भने गर्नु हुँदैन ।
पछिल्लो समय मुलुकमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकारलाई के सुझाव दिनुहुन्छ ?
अब सरकारले सबै भन्दा पहिलो अहिले देखिएका समस्या समाधानको लागि आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने र उद्योगमा लगानी गर्न बढवा दिने काम गर्नुपर्छ । यसो गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र केही हदसम्म ठिक ठाँउमा रहन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकमा विशेष आर्थिक क्षेत्र(सेज)को अवधारणा लिएर काम गरिरहेका छन् । यसमा सरकारसँग अनुमति लिएर निजी क्षेत्रले उद्योगहरु चलाएका छन् । त्यहाँको सरकारले सेजमा रहेर उद्योग चलाउने उद्यागीहरुलाई अतिरिक्त सुविधाहरुको व्यवस्था गरेका छन् ।
सरकारको निजी क्षेत्र मैत्री नीतिले गर्दा राम्रोसँग निजी क्षेत्रले उद्योग चलाएका छन् । सरकारलाई राजस्व बुझाएका छन । तर नेपालमा निजी क्षेत्र मैत्री नीति नै छैन । सरकारले पहिलो कुरा निजी क्षेत्रले उद्योग व्यवसायमा लगानी गर्ने उचित वातावरणसहित नीतिगत व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । नेपालमा उद्योगीले उद्योग खोल्न जग्गा पाउन मुस्किल छ । पाए पनि जग्गाको भाडा तिर्न सक्ने अवस्था छैन । कुनै व्यवसायीले उद्योग खोल्नु पर्दा सबै भन्दा धेरै जग्गामा लगानी गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुुलुकहरुमा उद्योग खोल्नको लागि बनाएको नीतिको कारण त्यहाँका उद्योगीको मनोवल उच्च रहेको छ । भने निजी क्षेत्रले उद्योग व्यवसायमा खुलेर लगानी गर्न र अन्य मुलुकसँग प्रतिष्पर्धी बन्न सकेका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय देशहरुमा जस्तो उद्योग स्थापनाको लागि सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउने, उद्योग खोल्ने उद्योगीलाई अन्य अतिरिक्त सेवा सुविधा लगायतको काम नेपाल सरकारले ग¥यो भने नेपालमा पनि उद्योगहरुको विकास हुनसक्छ । अन्य देशमा सरकारले उद्योग अनुसारको फरक–फरक रुपमा विशेष नीति बनाएको छ । तर,नेपालमा एउटै नीतिबाट सबै प्रकारका उद्योगहरु सञ्चालन भइरहेका छन् ।
यस्तो सम्भव हुँदैन । अब सरकारले एउटा विशेष उद्योगको लागि दीर्घकालीन नीति बनाउन र त्यसको लागि सरकारले के–के सुविधा दिन सक्छ त्यसको काम गर्न परिसंघ लागेको छ । नेपालमा हरेक वस्तुको करको दर एउटै रहेको छ । अब आयात हुने वस्तु अनुसार मल्टि करको दर कायम गर्नुपर्छ । यस्तो गर्दा वस्तु अनुसार लागत कम हुन्छ ।
tadalafil 40mg usa - brand tadalafil 10mg brand name cialis
buy plaquenil generic - purchase hydroxychloroquine without prescription buy plaquenil 400mg pill
buy ivermectin 12 mg - stromectol oral cost stromectol
order cephalexin 500mg without prescription - cleocin 300mg drug order erythromycin 250mg without prescription
order sildenafil 100mg pill - buy fildena 100mg oral antabuse
rhinocort medication - budesonide tablet cefuroxime 250mg pills
careprost cheap - trazodone order online desyrel 50mg drug
buy sildenafil 150mg for sale - ranitidine 150mg sale order ranitidine 300mg generic
buy tadalafil 5mg generic - ivermectin 6mg stromectol covid and ivermectin
buy tadalafil 5mg online cheap - ivermectin order the best ed pill
gambling games - order prednisone 20mg online prednisone 10mg cheap
cheap prednisone 40mg - buy accutane 10mg isotretinoin 40mg brand
amoxicillin 500mg brand - amoxil 1000mg canada viagra 50mg pill
cialis cost - brand cialis 10mg buy tadalafil 20mg without prescription
ivermectin 12 mg pills - ivermectin 12 mg tablet order azithromycin generic
brand zithromax - zithromax 500mg uk methylprednisolone canada
buy baricitinib 2mg online - baricitinib online priligy us
purchase glucophage pills - metformin 1000mg price lipitor 20mg ca
generic amlodipine - purchase norvasc pills prilosec usa
lopressor 100mg us - order lopressor online tadalafil 40mg drug
tadalafil withoutadoctor's prescription - sildenafil on line buy sildenafil for sale
ivermectin4mg - ivermectin 3mg withoutadoctor prescription cost of ivermectin pill
purchase clomid pills - albuterol canada zyrtec 10mg price
desloratadine pill - aristocort online buy aristocort pills
cytotec price - synthroid 75mcg pill buy synthroid 75mcg sale
viagra without prescription - brand name viagra buy neurontin 800mg pill
cialis order online - tadalafil cheap order generic cenforce
order diltiazem online cheap - buy zovirax 400mg pills zovirax 400mg cheap
order generic hydroxyzine 25mg - atarax 25mg pill order crestor 10mg pills
ezetimibe pills - motilium us citalopram online buy
sildenafil 100mg pills for sale - order lisinopril online flexeril ca
order viagra sale - brand cialis buy tadalafil 20mg generic
toradol 10mg oral - tizanidine 2mg sale purchase ozobax without prescription
colchicine 0.5mg without prescription - colchicine 0.5mg pills order generic strattera 25mg
sildenafil 100mg usa - clopidogrel 150mg cheap plavix 75mg oral
viagra 100mg price - buy clopidogrel 150mg generic oral plavix 75mg
buy nexium 40mg sale - promethazine buy online buy phenergan for sale
tadalafil india - Cialis woman tadalafil 40mg tablet
generic modafinil - non prescription erection pills buy erectile dysfunction meds
isotretinoin 40mg ca - purchase azithromycin for sale zithromax 500mg ca
order lasix 100mg - purchase doxycycline order viagra 150mg generic
tadalafil 10mg uk - viagra 100mg oral buy viagra 100mg sale
tadalafil 10mg brand - order cozaar 50mg pills order coumadin 2mg online
topamax online order - topiramate buy online buy sumatriptan without prescription
avodart 0.5mg pills - order generic tadalafil cialis professional
sildenafil pills 50mg - viagra price buy tadalafil 20mg
non prescription ed drugs - buy prednisone 5mg for sale prednisone 5mg uk
buy isotretinoin 10mg pill - amoxil cheap order amoxicillin 250mg pills
buy furosemide 100mg online cheap - generic furosemide 40mg zithromax 250mg usa
order doxycycline 100mg online - buy doxycycline 200mg online cost aralen
tadalafil 10mg pill - Buy no rx cialis free shipping viagra
modafinil 200mg ca - brand modafinil 100mg sildenafil oral
buy erection pills - erectial dysfunction buy deltasone generic
accutane order online - amoxicillin tablets celecoxib cheap
flomax 0.4mg us - buy tamsulosin 0.2mg sale order aldactone without prescription
zocor 20mg ca - help write my paper paper writing websites
best casino online - free slots online college essay for sale
best online casinos that payout - free casino slots ampicillin 500mg usa
order cipro 500mg without prescription - cialis 40mg tablet order tadalafil 5mg pill
viagra 150mg ca - order viagra 150mg without prescription vardenafil online sale
prednisolone 40mg drug - cheap gabapentin without prescription pfizer cialis
buy clavulanate sale - usa pharmacy cialis cialis 20mg
buy sulfamethoxazole online - brand viagra 50mg cheap sildenafil generic
buy cephalexin sale - cephalexin 500mg pills buy erythromycin online
fildena 50mg pills - fildena 50mg tablet ivermectin 3mg over counter
purchase provigil without prescription provigil medication provigil 200mg oral
rhinocort ca - tadalafil over the counter buy antabuse 500mg generic
purchase modafinil generic modafinil order provigil 100mg us
brand modafinil 200mg provigil generic buy modafinil generic
order generic modafinil order provigil pills
order ceftin generic - methocarbamol pills tadalafil 10mg drug
provigil us order provigil 100mg pills provigil 200mg ca
provigil 100mg price order provigil 200mg online cheap provigil 200mg without prescription
purchase ampicillin pill - buy ampicillin 250mg for sale buy tadalafil pills
order modafinil 200mg buy provigil
order amoxicillin pills - cheap zithromax 500mg buy vardenafil without prescription
अख्तियार र लोकसेवासहित संवैधानिक आयोगमा २० जना नियुक्त
प्रतिगमन झुक्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ, हामी जित्दै छौं : झाँक्री
राहुल गान्धीको ‘बाबु र काकाकै शैली’, गृह मन्त्रालय र सुरक्षाकर्मी तनावमा
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग प्रमुखमा खरेल नियुक्त